Lire la Suite « Fanatsarana ny Fandraharahana ny Fonja » →
Fandraharana ny Fonja
Published Date: 13 novembre 2020
FIOFANANA AMIN’NY FITANTANAM-BOLA
Atrikasa fiofanana momba ny fitantanam-bola no natrehin’ireo « Inspecteur d’Administration Pénitentiaire » (IAP) miisa 21 natao teto Fianarantsoa nandritra ny 4 andro. Avy aty amin’ny tapany atsimon’ny Nosy avokoa ireo Talem-paritra (DRAP) sy tompon’andraikitra eo anivon’ny Fandraharahana ny Fonja, mpandray anjara. Tanjona ny hanamafisana ny traikefa sy fahaiza-manao amin’ny lafiny fitantanam-bola. Mitondra fanazavana Rtoa Talen’ny Fandaharanasa sy Fampitaovana ny Fandraharahana ny Fonja (DPRP) ny IAP Raheriniaina Emma, arahin-dRtoa Andriamampiandra Hasindraibe Christiane, Mpandrindra ny tetikasa PAJMA, izay manohana ny fikarakarana izao atrikasa nifarana androany zoma 13 novambra 2020 izao.izao.
Ady amin’ ny herisetra mifototra amin’ny maha-lahy na maha-vavy
TSY HANDEFERANA IREO TRATRA MANAO HERISETRA MIFOTOTRA AMIN NY MAHALAHY NA MAHAVAVY
Tsy handeferana ireo tratra manao herisetra mifototra amin ny mahalahy na mahavavy. Tsy hisy intsony ny sazy miantona fa miditra am-ponja avy hatrany ireo manao izany ka voamarina ilay tranga. Santionany amin’ny fepetra vonjimaika noraisin’ny Ministeran’ny Fitsarana tao aorian’ny baiko nomen’ny Filoham-pirenena nandritra ny Filankevitry ny Ministra natao omaly. Hihatra manerana ny Fitsarana eto Madagasikara ireo fepetra ireo.